Vaovao - fahalalana ny menaka sakafo
Fahalalana momba ny menaka sakafo
Ny fampiasana menaka
1. Mihinana. Iray amin'ireo otrikaina telo lehibe (gliosida, proteinina ary menaka) tsy tokony hananan'ny vatan'olombelona izany. Ny fanjifana dia iray amin'ireo famantarana ny fari-piainana. Mba hanomezana asidra matavy tena ilaina, vitamina mety levona ao anaty tavy ary fepetra mahavelona vitamina matavy, hery, manatsara ny tsiro.
2. Indostria. Hoso-doko, fanafody, menaka manitra, diesel biolojika, sns.
3. Fahano. Mila kely kokoa ny biby. Tsy mila izany mihitsy ny zava-maniry. Ny voly solika sy ny biby sasany dia zavamaniry biokimika izay mampifangaro menaka sy tavy.
Tahotra efatra: hafanana, oksizena, hazavana (indrindra ny ultraviolet), fahalotoana (indrindra ny varahina, arahan'ny vy, no mitarika ny fahasimban'ny solika).
Amin'izao fotoana izao, ny faritra biby sy zavamaniry ary zavamiaina bitika misy menaka mihoatra ny 10% dia matetika ampiasaina ho menaka mpanamboatra menaka, ary ny ampahany mitondra menaka ireo zavamaniry dia voa sy pulp amin'ny ankapobeny.
1, menaka legioma:
1) Menaka ahitra: soja, voanjo, voadio, sesame, landihazo (voly solika dimy lehibe any Shina), sns.
2) Menaka hazo: voanio palmie, voankazo; voanio voanio, voankazo; voankazo oliva, kernel sns ..., tsy manam-paharoa amin'i Shina ny voa Tung.
3) Amin'ny vokatra: bran vary, germ germ, germ germ, voa voaloboka, sns.
2. Fanondroana kalitaon'ny menaky ny zavamaniry
1) Votoatin'ny solika total (tsy manilika an'i Daza).
2) Votoatin'ny hamandoana.
3) Votoatin'ny fahalotoana.
4) Votoatin'ny voamadinika tsy tanteraka.
5) tahan'ny malefaka (sanda asidra matavy).
6) Taham-bozaka voadio madio.
Dingana famokarana solika
1. Dingana fanontana menaka fanindroany.
2. Fomba fizarana leaching mialoha.
3. Dingana mivantana fitrandrahana.
4. Dingana fanaovana menaka fanaovan-gazety iray.
Ny akora samihafa dia samy manana ny fomba fanaovany ny menaka
Ireto ny fizotry ny famokarana solika lehibe:
1. soja: misy ny fizarana indray mandeha ary ny fizotra mangatsiaka. Noho ny fitakiana kalitao isan-karazany amin'ny sakafo soja, ny fitrandrahana indray mandeha dia misy ny fikolokoloana, ny fanitarana ary ny fizotry ny tany ambany.
2. Rapeseed: mazàna dia ny dingana fitrandrahana gazety, misy ny peeling, ny fitrandrahana fitrandrahana.
3. Voanjo voanjo: noho ny fomba fanamboarana menaka isan-karazany dia afaka mamokatra menaka voanjo mahazatra sy menaka voanjo tsiro any Luzhou izy.
4. Cottonseed: ny fizotry ny fitrandrahana alohan'ny gazety ary ny fitrandrahana fitrandrahana, ny fizotry ny fitrandrahana dia manana kaonty iraisana mahazatra sy ny fizarana fizarana ampahany misy solika roa.
5. Sesame: noho ny fizotra menaka samihafa, misy menaka sesame mahazatra, menaka sesame vita amin'ny masinina ary menaka sesame Xiaomo.
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Mpanondraka solika, Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Gazety Oliva Oliva, Masinina fanaovan-gazety menaka kely, Mpanondraka solika voa, Masinina fanaovan-gazety solika,